कसरी अनलाइन व्यापार सुरु गर्ने | ई-वाणिज्य समाचार
'यदि तपाईं इन्टरनेटमा हुनुहुन्न भने, तपाईं अवस्थित हुनुहुन्न', वाक्यांशले घण्टी बज्छ? यो केहि हो जुन, केहि वर्ष पहिले, तपाईंलाई हाँस्न सक्छ। तर आज यो लगभग एक वास्तविकता हो किनभने हामी सबै, वा हामी लगभग सबै, हामीलाई चाहिने कुराको लागि इन्टरनेट खोज्नुहोस्, हामीसँग यो कुनाको वरिपरि हुँदा पनि। त्यसकारण धेरैले वेबसाइट र पृष्ठहरू सिर्जना गर्न सुरुवात गर्छन्, तर, तपाइँसँग वास्तवमै भविष्य छ र6महिना वा एक वर्ष पछि बन्द नहुने अनलाइन व्यवसाय कसरी सुरु गर्ने?
कसैले पनि, र हामी दोहोर्याउँछौं, कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन कि तपाईंले यो समाप्त गरेपछि तपाईंको व्यवसाय समृद्ध हुनेछ। यदि कसैले गर्छ भने, भाग्नुहोस्। र यो हो कि, कहिलेकाहीं, हामी दुधको कथाको कारणले सामान्य ज्ञान गुमाउँछौं (र हामीलाई पहिले नै थाहा छ यो कसरी गयो)। तर हामीले तपाईलाई के भन्न सक्छौं कि त्यहाँ चरणहरूको एक श्रृंखला छ जसलाई ध्यानमा राखेर, ठुलो टाउकोका साथ, समयसँगै कायम राखिएको अनलाइन व्यवसाय सुरु गर्नलाई ध्यानमा राख्नु पर्दैन। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ ती के हुन्?
1 एक अनलाइन व्यापार सुरु गर्न सुपर महत्त्वपूर्ण चरणहरू
1.1 आफ्नो विचार विश्लेषण
1.2 प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण गर्नुहोस्
1.3 आफ्नो व्यापार योजना बनाउनुहोस्
1.4 आफ्नो वेबसाइट डिजाइन गर्नुहोस्
1.5 कसरी अनलाइन व्यवसाय सुरु गर्ने र यसलाई औपचारिक बनाउने
1.6 अनलाइन मार्केटिङ रणनीति सुरु गर्नुहोस्
एक अनलाइन व्यापार सुरु गर्न सुपर महत्त्वपूर्ण चरणहरू
चाहे एक विचार सुरु गर्दै, एक eCommerce सिर्जना वा इन्टरनेट संग गर्न को लागी केहि पनि, तपाईले दिमागमा राख्नु पर्ने पहिलो कुरा यो हो कि यो रातारात गरिएको छैन। तपाईंलाई एक विचार दिन; तपाईको व्यक्तिगत ब्रान्ड सिर्जना गर्न, जसले तपाईलाई अधिकार दिनेछ र मानिसहरूलाई तपाईलाई चिनाउने छ, एक देखि तीन वर्ष सम्म लाग्न सक्छ (र धेरै जसो समय यो एक भन्दा तीन को नजिक छ)। व्यवसाय वा ईकमर्सको मामलामा, यसलाई पाँच वर्षसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ। र के तपाईं त्यस समयमा सम्भावित हानिहरू सामना गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? सबैभन्दा सम्भव छ कि छैन।
यस कारणले गर्दा, निर्णयहरू हल्का रूपमा लिन सकिँदैन, यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। र यी चरणहरूले तपाईंलाई यो गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
आफ्नो विचार विश्लेषण
यो सोच्न लायक छैन कि तपाईको विचार महान छ, सबैले यसलाई मन पराउनेछन्, तपाई यसमा सफल हुनुहुनेछ। आफैलाई सोध्नुहोस् किन यो धेरै राम्रो छ, किन अन्य मानिसहरू यसलाई किन्न चाहन्छन्।
तपाईंले आफ्नो उत्पादन वा सेवा कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ, यदि यसको भविष्य छ भने, यदि यो मापनयोग्य छ भने... यी सबैको जवाफ कुनै पनि प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि नै हुनुपर्छ।
हाम्रो सिफारिस यो हो कि तपाईंले त्यस्तो विचार फेला पार्न प्रयास गर्नुहोस् जुन धेरै शोषण गरिएको छैन (अहिले लगभग सबै कुरा आविष्कार गरिएको छ) वा कमसेकम जुन ज्ञात कुराको क्रान्ति मानिन्छ। यो बाँकीबाट अलग खडा हुने तरिका हो।
प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण गर्नुहोस्
अब तपाईलाई आफ्नो विचार राम्ररी थाहा छ, तपाईलाई यसको बल र कमजोरीहरू थाहा छ। तपाईले यो कुरालाई संकेत गर्ने सबै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा के हो?
आज सबैसँग प्रतिस्पर्धी छन् र तपाईंले तिनीहरूलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ, पहिलो किनभने तिनीहरूसँग तपाईं जस्तै समान उत्पादन हुन सक्छ, र तपाईंले आफूलाई अरूबाट कसरी अलग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेर जान्न आवश्यक छ; र दोस्रो किनभने यदि त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छ भने, सायद यो व्यवसाय जति नाफादायी नहुन सक्छ तपाईले पहिले सोच्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो व्यापार योजना बनाउनुहोस्
यद्यपि तपाइँ के चाहानुहुन्छ एक अनलाइन व्यवसाय सिर्जना गर्न हो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँसँग एक व्यापार योजना छ जुन योजना छ छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा तपाइँको कार्यहरू के हुनेछ, बजार अध्ययन के हो, तपाइँको लक्षित ग्राहक, तपाइँको प्रतिस्पर्धा, तपाइँ कसरी वितरण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, विज्ञापन रणनीतिहरू, स्रोतहरू ... छोटकरीमा, तपाइँ त्यो परियोजना सुरु गर्न आवश्यक सबै कुरा।
जब तपाईंसँग यो "शारीरिक रूपमा" हुन्छ यसले आकार लिन्छ र यसको भविष्य हुन सक्छ भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, तपाइँ समस्याहरूको सामना गर्न र अवरोधहरू वरिपरि प्राप्त गर्न "कुशन" नभएको जोखिममा हुनुहुन्छ।
आफ्नो वेबसाइट डिजाइन गर्नुहोस्
सावधान रहनुहोस्, राम्रोसँग डिजाइन गर्नुहोस्, यो केहि गर्न लायक छैन किनभने यदि यो मामला हो भने, तिनीहरूले तपाइँको पृष्ठमा प्रवेश गर्दैनन् र तपाइँसँग भ्रमणहरू प्राप्त गर्न राम्रो स्थिति वा SEO हुनेछैन। यदि तपाइँ यसलाई कसरी गर्ने थाहा छैन भने, यो गर्नको लागि एक पेशेवर भाडामा लिनु राम्रो हुन्छ।
यो सत्य हो त्यहाँ धेरै पृष्ठहरू र यहाँ सम्म कि होस्टिंग कम्पनीहरू छन् जुन उपकरणहरू छन् जुन मिनेटमा तपाईंको आफ्नै वेबसाइट सिर्जना गर्न सकिन्छ र ज्ञान बिना। तर के तपाई साँच्चै यसको साथ बाहिर खडा हुने आशा गर्नुहुन्छ? साथै, दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईसँग धेरै सीमितताहरू हुनेछन् र SEO स्तरमा तिनीहरू सबैभन्दा रमाइलो वा स्थितिमा सजिलो छैनन्।
एक वेबसाइट प्राप्त गर्न तपाईंलाई निम्न आवश्यक हुनेछ:
एक डोमेन: यो तपाईको वेबसाइटको url हो, तपाईको पृष्ठ देखा पर्नको लागि मानिसहरूले आफ्नो ब्राउजरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने ठेगाना हो।
एक होस्टिंग: यो होस्टिंग हो जहाँ तपाइँको वेबसाइट बनाउने सबै फाइलहरू हुनेछन्। यो एक गुणस्तर छनोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ ताकि यो दिनको 24 घण्टा देखिने र परिचालन होस् र तपाईंलाई कुनै समस्या नदिनुहोस्।
एक SSL प्रमाणपत्र: यो अब आवश्यक छ, तपाईको वेबसाइटको सुरक्षा र Google को लागी तपाईलाई सुरक्षित व्यवसायको रूपमा हेर्नको लागि।
एकचोटि तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइट भएपछि, त्यहाँ अरू धेरै काम हुनेछैन।
कसरी अनलाइन व्यवसाय सुरु गर्ने र यसलाई औपचारिक बनाउने
तपाइँको अनलाइन व्यापार मा काम गर्न सुरु गर्नु अघि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ संग सबै कानूनी मुद्दाहरु क्रम मा छ। उदाहरण को लागी, तपाईं स्वरोजगार हुनुहुन्छ, वा कम्तिमा तपाईं VAT र तपाईंले प्राप्त गर्ने फाइदाहरू घोषणा गर्न ट्रेजरीमा दर्ता हुनुहुन्छ, अन्य कानुनी फारमहरू छनौट गर्नुहोस्, यी मुद्दाहरूमा तपाईंलाई मद्दत गर्न प्रबन्धक वा सल्लाहकार राख्नुहोस्।
अनलाइन मार्केटिङ रणनीति सुरु गर्नुहोस्
यो अत्यावश्यक कुरा हो किनभने तपाईंको "बजार" वास्तवमा इन्टरनेट नेटवर्क हुन गइरहेको छ र जहाँ तपाईंले ग्राहकहरूलाई उनीहरूलाई कायम राख्न र उनीहरूलाई तपाईंबाट किन्नको लागि आकर्षित गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण तपाईले यो प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भनेर जान्नुपर्दछ (जसलाई हामीले पहिले नै तपाईलाई भनिसकेका छौं कि रातारात होइन) र कसरी सकेसम्म चाँडो यसबाट अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ।
र बाहिर हेर्नुहोस्, के मार्केटिङ रणनीतिले एसईओ र वेब पोजिशनिङ मात्र समेट्दैन, तर सामग्री, सामाजिक सञ्जाल, इमेल मार्केटिङ... यदि तपाइँ यसलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्नुहुन्न भने, तपाइँको व्यवसाय जतिसुकै राम्रो भए पनि, ढिलो वा चाँडो यो क्लिक हुनेछ।
एक दृश्यता रणनीतिले पनि यसमा मद्दत गर्न सक्छ, किनकि यसले तपाईंको व्यवसायलाई राम्रोसँग चिनाउनेछ (विज्ञापन, एजेन्सीहरू, आदि मार्फत)।
एकचोटि सबै कुरा सकिएपछि, तपाईंले गर्नु पर्ने भनेको काम हो र आफ्नो व्यवसायलाई अनलाइनमा चिनाउनको लागि प्रयास गर्नुहोस् र समयमै, यदि तपाईंले सबै कुरा सही गर्नुभयो भने, यसबाट जीवनयापन गर्न सक्षम हुनुहोस्। के तपाइँसँग एक अनलाइन व्यवसाय छ जुन तपाइँ स्क्र्याचबाट सिर्जना गर्नुभयो? तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो भन्न सक्नुहुन्छ ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ईकॉमर्स समाचार » वास्तविकता र समाचार » स्टार्टअप्स र उद्यमीहरू » कसरी अनलाइन व्यापार सुरु गर्ने
पुन: ब्रान्डिङ: उदाहरणहरू